Grumman F-14B Tomcat miaraka amina endrika 4. Tsara tarehy fotsiny izy io! Ny zava-drehetra dia mihetsika. Kalitao tena avo lenta. Ahitana feo manokana, kojakoja virtoaly azo tsindriana ary tontonana 2D feno. Tsindrio L mba hampihetsika ny vokatr'ireo mpandoro.
Ny Grumman F-14 Tomcat fiaramanidina mpiady onboard rafitsary miova. Natao mba hiarovana ny andian-tsambo ny fanafihana an'habakabaka, dia ny mpiady voalohany natao tany Etazonia mba mampiditra ny lesona ny ady tany Vietnam. Tonga izao tontolo izao malaza ao 1986 noho ny sarimihetsika Top Gun tamin'i Tom Cruise.
Ny F-14 dia novolavolaina hanolo ny baikon'ny sambo F-111, F-111B. Ny fivoaran'ny F-111B dia nolavina aloha tany am-piandohan'ny 1968, rehefa hita fa ilay fitaovana, be loatra sy mavesatra loatra dia ny tsy fahampian'ny asa avy amin'ny fiaramanidina. Ny iraka an'ny F-14 dia ny fiarovana ny mpanafika baomba ataon'ireo fiaramanidina, noho izany dia fitaovana miaraka amin'ny balafomanga lava be sy fitaovana mahery vaika.
Ny F-14 dia tandindomin'ny fiovaovan'ny toetr'andro roa mipetraka: afaka "manala" ny elany manodidina ny teboka pivotany ao amin'ny fanamboaran-tsofina mankany amin'ny rotra. Izy io dia mifanaraka ny fepetran'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny haingam-pandehan'ny rivotra (haingam-pahefana) na haingam-pandeha mandritra ny fiatoana sy ny Dogfight (ny elatra havanana). Izy io dia fehezin'ny pilotan'ny tandem sy ny manamboninahitra talohan'ny hamelezany azy. Izany dia miorina amin'ny F-4 Phantom II ary manome fahafaha-miasa ara-pitaovana. (Wikipedia)
Downloads 28 993
Jeff Dobbing (tariny Voir fichier readme)